(Emelitere ikpeazụ On: 26/02/2021)
Njem bachelorette na azumazu bu ezigbo ohere iji gaa njem, nwaa ihe ọhụụ ma mebie usoro ihe omume. Gini mere ị ga - eji mee ya ụdị ejiji ma gaa n'ụzọ niile wee gbasaa ebe niile? Glamping bụ nhọrọ dị ịtụnanya maka bachelo na-egbu mmụọ na njem bachelorette. Obodo French dị egwu ọnọdụ maka ịma ụlọikwuu na dara oké ọnụ Mongolian imezi yurts na breathtaking French ala ubi na ezigbo ndị enyi gị.
You chọrọ itinye mgbagha blọọgụ anyị “7 Best Bachelor Ma Bachelorette Trips Na Europe” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bachelor-bachelorette-trips-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)